Info – Page4– zlkontempo
Posted on August 9, 2012 | by zlkontempo | LeaveaComment on အွန်လိုင်းကဗျာကိစ္စအချို့
ရှေးတုန်းက ကဗျာကို ပေရွက်ပေါ်ကညစ်နဲ့ ရေးခြစ်ခဲ့ကြတယ်။ စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းအတတ်ပညာ ပေါ်လာတော့ စက္ကူပေါ်မင်နဲ့ ရေးသား/ရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်။ စက္ကူပေါ်သစ်သားဘလောက်တုံးတွေနဲ့ `ဘလောက်´ ပုံနှိပ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ပုံနှိပ်စက်ပေါ်လာတော့ စက္ကူပေါ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလာကြတယ်။ ဂက်စတက်တ်နာ ပေါ်လာတော့ ဂက်စတက်တ်နာ/ဖယောင်းလှည့်စက္ကူပုံနှိပ်ပေါ်လာတယ်။ ကွန်ပြူတာပေါ်လာတော့ ကွန်ပြူတာပေါ်စာရိုက် ၊ ပရင့်တ်အောက်ထုတ်ပြီး အဲဒါကို တစ်ခါ ဖိုတိုမိတ္တူကူးလို့ရတဲ့ ကွန်ပြူတာ/ဖိုတိုကော်ပီ စာတွေပေါ်လာတယ်။ အင်တာနက် access ရလာတော့ online ပေါ်ရေးသားတင်ပြမှုတွေပေါ်လာတယ်။ အခုထိ စက္ကူပေါ်ခဲတံ ၊ ဘောပင်စသည်တို့နဲ့ရေးသားတာတွေလည်းရှိတုန်းပါပဲ။
ဆိုလိုတာက `ပေရွက်ကဗျာ´ ၊ `ဘလောက်တုံးကဗျာ´ ၊ `ပုံနှိပ်ကဗျာ´၊ `ဖယောင်းစက္ကူကဗျာ´၊ `ကွန်ပြူတာ/ဖိုတိုကော်ပီ ကဗျာ´ စတာတွေမရှိခဲ့ပဲ အခုမှ`အွန်လိုင်းကဗျာ´ ဆိုတာပေါ်လာခြင်းပါပဲ။ ခေတ်ရဲ့ တိုးတက်မှုရဲ့ အသီးအပွင့်တစ်ခုဆိုတာကိုငြင်းလို့ မရပေမယ့် `အွန်လိုင်းကဗျာ´ ဆိုတာနားလည်လွဲစရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရင်ပိုမှန်မလားပဲ။ အဲဒီတော့ ၊ အွန်လိုင်း ကဗျာဆိုတာဘာလဲ။
Posted in Articles, Info | Tagged Articles, Info, Online Poetry
Posted on March 6, 2012 | by zlkontempo | LeaveaComment on မန္တလေးစာဖတ်ပရိသတ်များအား အနူးအညွတ် တောင်းပန်ခြင်း
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဋ္ဌာန Open Mic ကဗျာပွဲလေးသတင်း
Posted on February 13, 2012 | by zlkontempo | LeaveaComment on ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဋ္ဌာန Open Mic ကဗျာပွဲလေးသတင်း
ရန်ကုန်မြို့ Alliance Francaise ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဋ္ဌာနမှာ ၁၀ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၂ သောကြာနဲ့ ၁၁ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၂ စနေ ညနေ နှစ်ညနေမှာ Open Mic ကဗျာပွဲလေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီဋ္ဌာနမှာ တစ်ပတ်လုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြဇာတ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင် များနဲ့ စိတ်ဝင် စား သူများတွေ့ဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲရဲ့ အဆုံးသပ်အနေနဲ့ စင်တင်ပွဲလေးလုပ်ဖို့ မူလကတည်းက စီစဉ်ထားတဲ့ အထဲမှာ Theatre of the Disturbed က (ဒါရိုက်တာ/ပြဇာတ်ဆရာ/ပါဖေါ့မင့်စ်) ကို ဥာဏ်လင်းထက်က ကဗျာရွတ်ပွဲလေးပါထည့်ချင်တယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ၉ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၂ ကြာသာပတေးနေ့လည်လောက်လာပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း `ဟုတ်ကဲ့ ၊ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ မယ်´လို့ ဂတိပေးလိုက်ပါ တယ်။ သူ့ဘက်ကလည်း သူသိတဲ့ ကဗျာဆရာတွေကို အကြောင်းကြားမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ကိုမိုးဝေးပေါ့။ ပြီး. . . ကိုမိုးဝေးကတစ်ဆင့် ။ . . ။
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဋ္ဌာန AF နဲ့ ကျွန်တော်ရင်းနှီးတာကြာပါပြီ။ အခုကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ AF စာကြည့်တိုက်မှူး ဦးဂျင်မီ (ပန်းချီဆရာ ကျော်ညွှန့်လင်း/ပါဖေါ့မင့်စ်)က အဲဒီမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အနုပညာပွဲတိုင်းကို ဖိတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မအားတာများ တော့မသွားတာများပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ ၊ AF မှာ ကဗျာပွဲလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ `အိုကေ´ပေါ့၊ `လုပ်ကြတာပေါ့´ဆိုပြီး `ပြင်သစ် ကဗျာရွတ်ပွဲ – နွေဦးညနေ´ အစီအစဉ်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (ရုတ်တရက်ခုနှစ်မမှတ်မိတာသီးခံပါ။ ၂၀၀၄လို့ထင်ပါတယ်။ ထားပါ။) ကိုပြည့်မင်း ၊ ကိုမိုးဝေး ၊ ကိုဟိန်းမြတ်ဇော် ၊ ကိုသည်မော်နိုင် ၊ ဆရာမောင်မောင်ဇေယျ ၊ ဒေါ်မအိတို့လည်းပါကြပါတယ်။ အဲဒီပွဲပြီးလို့ ထုံးစံအတိုင်း ပွစိပွစိ တွေပေါ့။ လက်သိပ်ထိုးလုပ်တယ်တို့ ၊ ဘယ်သူကျတော့ မဖိတ်ဘူးတို့ ။ အဲဒါနဲ့ Futurism နှစ် (၁၀၀)ပြည့်ပွဲလုပ် မယ်ဆိုတော့ ကိုလှသန်း၊ ကိုကြည်ဇော်အေး စသူတို့ကို တကူးတက ဖိတ်ကြားပါတယ်။ Slam Poetry မိတ်ဆက်ပွဲတုန်းကလည်း နီးစပ် ရာတွေနဲ့ နီးစပ်ရာတွေရဲ့ ဆက်စပ်နီးစပ်ရာတွေကိုပါ ဖိတ်ပါတယ်။
အဲ . . . ကိုဥာဏ်လင်းထက်လည်းပြင်သစ်ရောက်နေ ၊ ကိုဂျင်မီလည်း မကွယ်လွန်ခင်အထိ နာမကျန်းဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော် လည်း AF နဲ့ တော်တော်အဆက်ပြတ်သွားပါတယ်။ ကြာသာပတေးနေ့က ကိုဥာဏ်လင်းထက်ရောက်လာတော့မှ ပြန်ဆက်ဖြစ်တဲ့ သဘောပါ။
Posted in Articles, Info, News | Tagged Articles, Info, News
ဗီယက်နမ်အဖွားရဲ့ အနမ်း (အိုးရှင်ဗူအောဝ်င်း) under Poetry
ကျူပင် under Prose
Archives Select Month September 2020 (4) August 2020 (10) July 2020 (6) June 2020 (16) May 2020 (8) April 2020 (11) March 2020 (5) February 2020 (4) January 2020 (4) December 2019 (3) November 2019 (5) October 2019 (3) September 2019 (8) August 2019 (7) July 2019 (1) June 2019 (3) May 2019 (4) April 2019 (6) January 2019 (1) August 2018 (4) July 2018 (15) June 2018 (4) May 2018 (13) April 2018 (10) March 2018 (3) February 2018 (11) January 2018 (7) December 2017 (13) November 2017 (15) October 2017 (8) September 2017 (1) August 2017 (3) July 2017 (6) June 2017 (2) May 2017 (1) April 2017 (6) March 2017 (17) February 2017 (16) January 2017 (11) November 2016 (1) September 2016 (1) August 2016 (1) July 2016 (2) May 2016 (1) March 2016 (2) February 2016 (1) September 2015 (1) July 2015 (3) February 2015 (1) November 2014 (1) October 2014 (2) September 2014 (7) May 2014 (1) April 2014 (1) March 2014 (1) January 2014 (3) December 2013 (6) November 2013 (1) September 2013 (1) August 2013 (1) July 2013 (12) June 2013 (2) May 2013 (2) April 2013 (1) March 2013 (1) February 2013 (2) January 2013 (5) December 2012 (3) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (9) July 2012 (3) June 2012 (1) May 2012 (2) April 2012 (4) March 2012 (4) February 2012 (11) January 2012 (3) December 2011 (4) November 2011 (1) September 2011 (1) February 2011 (1) September 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) July 2009 (1) June 2009 (3) May 2009 (2) January 2009 (1) January 2008 (2) October 2007 (1)
Categories Select Category Articles (48) Info (21) Interview (1) News (13) Notes (81) Poetry (364) Prose (9) Reading (5) Reviews (5) UMP (1) Visual/ Concrete (1)